Mafungiro ekunaka uye zvisingabviri mifananidzo - Paradoxa mifananidzo
Chimwe chinhu chiri kufamba ikoko?
Zvimwe zviratidzo zvekuona
Mavara ekupenya ndiwo nguva yakawanda yevana vemakore ose. Pamusoro pewebsite yedu muchawana zvinangwa zvakasiyana-siyana pamisoro yakasiyana-siyana: Zviratidzo zvekufungidzira zvisingabviri uye zvisingabviri zvinyorwa, zvinodanwa kuti paradoxes, kufadza mwana wese.
Mafungiro okuona uye zvisingaonekwi mifananidzo
Optical illusions - illusions
Mafungiro ekuona anotaura nezvezvinhu zvose zvevanhu venhema vanoona sechinhu chakabatanidzwa.
Izvi zvinogona kuitika, kune rumwe rutivi, patinoona zvinhu zvakasiyana kubva pane zvavari chaizvo kuburikidza nenzira yakasiyana yekumirira.
Kana vanhu vakasiyana mune imwe template vanocherechedza zvimwe zvinhu kana zvinhu zvese zvinokweverwa nenzira yavasingazoitike mumamiriro akajairika uye huropi hwedu hunovhiringidzika.
Nyara nemafungiro edu ekufungidzira. Dzvanya pakusangana kuenda kune peji ne template inoenderana:
Ndeupi mutsetse wakareba?
Ndeupi mufananidzo wakareba kupfuura mamwe?
Iyo denderedzwa yakakura
Parallel or crooked?
Kushandura pahungano huchienda kune peji ne template inoenderana:
Zviso kana vase
Matoro matatu kana mana?
Optical illusion - unooneiko?
Mumifananidzo iri pasi apa, pane nguva dzose inenge ichiita chimwe chinhu chiri kufamba, tarisa zvakanyanya! Dzvanya pamifananidzo kuti uwedzere zvifananidzo:
Izvi zvinotenderera .... kwete
Kana munhu akatarisa chifananidzo ichi nenzira yakanyanyisa, maonero evanhu anowana mafungiro ekufambisa maitiro akasiyana-siyana. Zvechokwadi, hapana chinofamba mumufananidzo uyu!
Zvakare, uropi hwedu huchinyengera kwatiri pakubatana nemeso edu: kuonesa kwemaziso kunowanikwa mupfungwa yekufungidzira yemufananidzo.
Kanisza Square - Kuona chimwe chinhu chisipo
Kunyangwe tichidavira zviri pachena nemaziso edu: hapana nzvimbo yakakosha mukati, huro hwedu hupfungwa chifananidzo chinotarisa pamatongerwo anozivikanwa. Ichi chinoshamisa chinonzi "Kanisza Square".
Izvozvo zvose hazvina kururama zvachose?
Chaizvoizvo? Uchitenda kana kwete, mitsetse yakafanana zvachose. Iwe unokwanisa kuyera ichi kana, nekuisa pfungwa pamiganhu miviri yakasiyana, unogona kuona kuti mitsetse yose yakafanana.
Optical illusion kuvanhu vakuru
Vana vanoona chimwe chinhu chakasiyana nevakuru vakawanda ...
Hazvigoneki chimiro - katatu
Hazvigoneki chimiro - denderedzwa
Hazvigoneki chimiro - matanho